Izibane zomsebenzi wokumba / izibane zokukhanyisa 1GA 997 506-307 DC12V55W 1GA 998 522-011 DC24V70W 819909306 803504633
Kwi-SK CATERPILLAR CAT HYUNDAI ZX PC DOOSAN XCMG CLG Excavator Boom Light Work Work Light Lightbox Isixhobo sezibane eziphambili
Isicoci somlilo weemoto 181900-2270 800104326
Iimodeli ezisebenzayo XCMG XE200 XE215CA, XE230C, XE235C, XE260C, XE370, 370CA Izinto zokufaka iikhowudi 800104326 Igama lezinto 181900-2270 indibano yemoto yokupaka I-Brand XCMG Imvelaphi Xuzhou kudidi lwemveliso. , Esika indlela yeoyile xa usebenza, kwaye umise umatshini osebenzayo
Iimodeli ezisebenzayo ze-XCMG XE335, XE370D, XE470D Izinto zokufaka iikhowudi Izinto zokucoca ulwelo Igama lokucoca umoya Brand XCMG Imvelaphi Xuzhou icandelo lemveliso. Ihluza ikakhulu umoya ukuqinisekisa ukuba umoya ongena kwi-injini ucocekile
Iphaneli yokulawula yomoya yeXcmg Excavator
Izixhobo ze-excavator ze-XCMG 135B 150D 200C 225 215 235 Iphaneli yokulawula imeko yomgangatho ophezulu
1.Featured amandla eyomeleleyo, injini Isuzu yokuqala ihlangabezana nemfuno yokusebenza kakuhle kakhulu. Uyilo lomdlalo ochanekileyo kunye nolawulo lokugcina amandla oluphambili lunegalelo kusetyenziso oluphantsi lwamafutha. 3. Ixabiso lokhuphiswano, umgangatho olungileyo kunye nokusebenza okuthembekileyo.
XCMG Pilot oyile ibhloko umthombo
Ukucaciswa 1. Inkqubo ye-hydraulic system ye-2.Wheel excavators Icandelo 3.Umgangatho ophakamileyo, amaxabiso aQikelelweyo 4.ISO9001: 2000
I-xcmg Isenzi soxinzelelo / i-Excavator Pressure Sensor
Le modeli yesenzi soxinzelelo lweXCMG XE135 XE150B XE215CA XE235C XE265CA XE335 XE370 XE370CA XE450 XE470CA XE470D kwaye iphumelele ukuthembana kunye nokwamkela kubathengi nakwiimarike. Olona ncedo luphambili kukuphakama komgangatho / ukumelana nokuthengiswa kwempahla kunye nobomi benkonzo ende kunye nexabiso eliphezulu ngexabiso njl
Inqanaba leXXMG gauge / inqanaba le-Excavator gauge 803173177 XE370, XE370CA, XE210B, XE230B, XE215C-260C, XE135C, XE150B YWZ-150
Sinokubonelela ngezixhobo ezisezantsi: * Injini yenyani eyi-assy. & Amacandelo: Injini yeYuchai, injini ye-Shangchai, injini ye-Weichai, i-injini ye-Cummins, njl. Njl. & Izahlulo: Ii-asi zeMeritor, i-axile ye-XCMG, ukuhanjiswa kwe-ZF, ukuhanjiswa kwangaphambili kwe-XCMG excavator XE360U iinxalenye zomgangatho we-XE360U gauge 803173177
XCMG emele izinyo Excavator / ecaleni kwamazinyo / XCMG isihlalo pin ZD180T 819954130 819954132 819954133
Iimodeli ezisebenzayo XCMG XE60 / XE60CA / XE60D Izinto zokufaka iikhowudi 819954130 819954132 819954133 Igama lezinto ZD180T izinyo sleeve ZD180 PIN pin ZD180 LOCK circlip Brand XCMG Imvelaphi Xuzhou kudidi lwemveliso. elula ngakumbi
XCMG amafutha lokucoca ulwelo 800105252 XE700, XE700C
Yandisa umjikelo wokubuyisela, gcina iindleko zokugcina, wandise ubomi benjini, ukunciphisa iindleko zepetroli, ukugcina ukusebenza kakuhle kwenkqubo kunye nokuphucula amandla emveliso.
XCMG amafutha lokucoca ulwelo 800151006 XE60 XE60CA XE60D
Icebo lokucoca ulwelo XCMG 800151018 800151019 XE60 XE60CA XE60D XE75 XE85C
I-D13-131, i-Liuwan Hardware kunye nesiXeko soMbane, indawo yoPhuhliso lwezoQoqosho, isixeko iXuzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China